लकडाउनमा रोकिएका लोकसेवाका परीक्षा तत्काल नहुने, त्रिविले पनि परीक्षा नगर्ने सम्भावना – NepalajaMedia
लकडाउनमा रोकिएका लोकसेवाका परीक्षा तत्काल नहुने, त्रिविले पनि परीक्षा नगर्ने सम्भावना
August 3, 2020 143
काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि जारी भएको लकडाउनमा रोकिएका लोकसेवा आयोगको परीक्षा तत्काल नहुने भएका छन् । आयोगले परीक्षाको तयारी थाले पनि कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ । सरकारले भदौ १ देखि लामोदूरीको यातायात सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसँगै आयोगले परीक्षाको लागि तयारी थाल्दै आएको थियो ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गीता कुमारी होमागाईंले परीक्षा लिने सहज परिस्थिति नभएकाले तत्काल लोकसेवाको परीक्षा नहुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले परीक्षाको विषयमा केही तयारी थालिरहेको थियो । नेपालमा दिनहुँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तो बेला परीक्षा गराउने परिस्थिति छैन । त्यसैले तत्काल परीक्षा हुँदैन ।’
उहाँले समय अनुकूल भएपछि मात्रै परीक्षा हुने उल्लेख गर्नुभयो । उनका अनुसार एक जिल्लामा मात्रै सिल भयो भने पनि आयोगको परीक्षा रोकिन्छ । त्यसैले सबै अवस्था अनुकूल भएपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका अनुसार प्राविधिक,अप्राविधिक लगायतका सबै परीक्षा लकडाउनले स्थगित भएका छन् ।
यस्तै दबाब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथि पनि परेको छ । तर त्रिविले यसबारेमा कुनै ठोस जानकारी दिएको छैन । भदौ तेस्रो सातादेखि त्रिविले आफ्ना रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ । तर कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर तलमाथि हुनसक्ने पनि त्रिविको दावा छ । अहिले देशका धेरै जिल्लाहरुमा निशेधाज्ञा लगाइएको छ । यस्तो हातलमा विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन गाह्रो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । जानकारी सबैमा सेयर गरिदिनुहोला !
Prevआज २०७७ साउन १९ गते सोमबारको राशिफल
Nextप्रदेश २ मा थप १३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेक सिल
कविताको घरनजिकै रहेको गोठको अगाडि ढिस्कोमा सानो बत्ती बलेको देखे, उनी कविता भए नजिकै पुगे, त्यसपछि …
आजदेखि के खुल्छ, के खोल्न पाइँदैन?
आफ्नो मृत्यु हुनुपूर्व श्रीमानले अन्तिम इच्छा यस्तो राखेपछि नजिकै बसेकी श्रीमतीले गरिदीन इच्छा पुरा..
पुर्व मन्त्रि जोसीको अन्तिम बिदाईमा देखियो यस्तो भावविह्वल दृश्य, श्रीमती र छोरी बे’होस , रोकिएन कसैको आँसु (भिडियो)
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25386)
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (15962)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12387)
आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो…. (10357)
यी ७ कुरा भुलेर पनि भगवानसँग नमाग्नुहोस, नत्र अशुभ हुनेछ ! (9047)
अचम्मै तरिकले घट्यो सुनको मुल्य ,कति पुग्यो तोलाको ? (8794)
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (8181)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (8052)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7138)
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6872)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, जेठ ३० गते आइतबार , तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि लागु भयो यस्तो नियम
शनिवार २४ घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने दोब्बर
कोरोनाले मानिस भकाभक म’र्न थालेपछि सपना रोका मगरले यस्ता तस्वीर सार्वजनिक गर्दै लेखिन् मार्मिक सन्देश
आफन्तको विहेमा हिँडेकी महिलाको कर णी पछी ह त्या, यस्तो अबस्थामा शव मकै बारीमा भेटियो